U-Iván Aivazovski kunye nothando lwakhe ngolwandle | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ioyile yolwandle yeIván Aivazovski
Kukho amagcisa athile okanye abazobi abafumana kwikhondo labo lomsebenzi wobugcisa okanye lobugcisa into eqhelekileyo kwaye eyenzelwe ntoni baxela inyhweba ekhethekileyo. UVan Gogh kunye noojongilanga bakhe yenye yemizekelo esinokuya kuyo ngokukhawuleza ukuze sifumane isilinganiselo kubapeyinti abathile ukuba akunakutsho kuthi.
Kwiveki ephelileyo ndikhumbule Umzobi weHungary oqinisekileyo eyayinomfanekiso wabasetyhini njengomxholo ophindaphindiweyo kuninzi lomsebenzi wakhe. Into eyenzekayo no-Iván Aivazovski kweyakhe ukuzinikela kwiimarinas kunye neendawo zomhlaba apho umgca wokujonga utsalwa lulwandle olungenasiphelo okanye ulwandle.
U-Aivazovski ngumzobi waseArmenian-waseRussia othe ekupheleni kwenkulungwane ye-XNUMX wazoba ezinye imisebenzi ekumgangatho ophezulu yolwandle Ezinika uvakalelo lokukwazi ukuntywilisela kuloo maza azokuwela kwelinye lamacala eenqanawa ezijamelene noqhwithela.
Umsebenzi oxuba amandla olwandle kunye nesibhakabhaka eqingqwe ngokugqibeleleyo, apho umbala oluhlaza okwesibhakabhaka ungumbala ogqwesileyo wokuya kwiithoni ezimnyama kunye nezikhanyayo, okanye ukumiliselwa ngombala omthubi onika iithoni eziluhlaza kakhulu ngamaxesha athile emini apho ukucaca kwamanzi kunika ukufudumala nokuphumla kolwandle oluzolileyo. emanzini ayo.
Umzobi ofumene ukwamkelwa ngokubanzi kokukwazi kwakhe ukuphinda enze kwakhona umgangatho ophezulu amandla endalo kunye neelwandle xa zincopho, kuxa isiphepho sijika le misinga ibe ngamaza ayingozi iimitha ezininzi ukuphakama.
Umzobi obalaseleyo esabelana naye kule migca kunye nemisebenzi yakhe embalwa ebonisa uthando lwaselwandle, ukuzola nokuba ngogonyamelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Ioyile yolwandle yeIván Aivazovski
Imeko yeZombie: Uhlalutyo lwayo lobuchwephesha kwimizuzu emi-3